महिनौँ कुरेर अप्रेसन थिएटर पस्नै लाग्दा ‘हडताल’ भन्दै फर्काइएकी इन्दिराको प्रश्न– बिरामीको मर्का नबुझ्ने कस्तो चिकित्सक ? – Health Post Nepal
महिनौँ कुरेर अप्रेसन थिएटर पस्नै लाग्दा ‘हडताल’ भन्दै फर्काइएकी इन्दिराको प्रश्न– बिरामीको मर्का नबुझ्ने कस्तो चिकित्सक ?
२०७५ चैत २२ गते १७:११
पर्वतकी इन्दिरा शर्माले वीर अस्पतालमा शल्यक्रियाका लागि समय लिएर पालो कुरेको ४ महिना पुग्यो । शुक्रबार (आज)का लागि शल्यक्रियाको डेट पाएकी उनले मंसिरदेखि औँला भाँचेर रोग लम्ब्याउँदै गइन् । लामो पर्खाइपछि आएको पालोमा शुक्रबार शल्यक्रिया गराउनका लागि उनी बुधबार वीरमा भर्ना भइन् । उनलाई बिहीबार बेलुकादेखि नै खालीपेट राखियो । तर, शुक्रबार एक्कासि चिकित्सकको सेवा–बहिष्कारका कारण उनको शल्यक्रिया हुन नसक्ने हल्ला अस्पतालभरि फैलियो । स्वास्थ्यसेवामा सरकारले हडताल निषेधित गरेको समाचारहरू मिडियामा ताजै चलिरहँदा सरकारी चिकित्सकले गरेको सेवा–बहिष्कारका कारण उनको पित्तथैलीको ढुंगा आज पनि बाहिर निस्किन पाएन ।
‘४ महिनादेखि आजका लागि पालो पाएकी थिएँ, तर आज बिहान थाहा पाएँ, डाक्टरको आन्दोलनले अप्रेसन बन्द गरिएको छ,’ इन्दिराले दुखेसो पोखिन् ।
वीरको ग्यास्ट्रो विभागले शुक्रबारका लागि ७ जनालाई अप्रेसनको डेट दिएको थियो । ती सातैजनाले एक–दुई दिनअघि नै भर्ना भएर अप्रेसनको तयारी गरिसकेका थिए । यो त एउटा अस्पतालको एउटा विभागको मात्र कुरा भयो । शुक्रबार देशका ७५ (हावाहुरी प्रभावित २ जिल्लाबाहेक) जिल्लामा सरकारी चिकित्सक संघ, नेपाल (गोदान)ले सेवा–बहिष्कारको आह्वान गरेको छ । ती सबै जिल्लाका सबै सरकारी अस्पतालका सबै विभागमा सेवाका लागि पालो कुरेर बसेका हजारौँ बिरामीको कथा इन्दिराको भन्दा कम पीडादायक छैन ।
३० वर्षीया इन्दिरा लामो समयदेखि पित्तथैलीमा १५ एमएमको बोकेर हिँडिरहेकी छिन् । उनलाई वीरको ग्यास्ट्रो विभागले शुक्रबार बिहान ११ बजे अप्रेसन हुने जानकारी दिएको थियो । ‘अप्रेसनको पूर्वतयारीस्वरूप हिजै बेलुकीबाट खाना नखाई बसेँ । घरबाट आफन्त आएर बस्नुभएको छ । अप्रेसनका लागि आवश्यक सबै औषधिको व्यवस्था गरियो, तर अप्रेसन हुँदैन भन्ने खबर आयो,’ इन्दिरा भन्छिन् ।
अप्रेसन रोकिएको बारे अस्पतालका कर्मचारीसित बुझ्दा सरकारी चिकित्सकको आन्दोलनले सेवा अवरुद्ध भएको जानकारी पाएको उनले बताइन् । चिकित्सकको आन्दोलन केका लागि भन्नेबारे भने आफू बेखबर भएको उनी बताउँछिन् । ‘अप्रेसन गर्न भनेर बच्चालाई घरमा छोडेर आएकी छु,’ उनी भन्छिन्, ‘सबै तयारी भएपछि एक्कासि ‘अप्रेसन हुँदैन, माइन्ड नगर्नुहोला’ पो भने ।’ अनिश्चित भनिएको चिकित्सकको आन्दोलन कहिले सकिएला भन्नेमा उनलाई अत्यास लागेको छ । ‘यतिका महिना ढुंगो बोकेर बसेँ, अब त अप्रेसन हुने भो भन्ने ठूलो आशामा थिएँ । तर, अझै पनि डाक्टरको अनिश्चितकालसम्मको बन्द भन्ने, हल्ला सुनेकी छु । अप्रेसन कहिले हुने हो थाहा छैन । बिरामीले कहिलेसम्म यसरी बस्नुपर्ने हो ?’ इन्दिरा प्रश्न गर्छिन् ।
आन्दोलनका नाममा बिरामीलाई मर्कामा पार्ने काम भएको उनको भनाइ छ । चिकित्सकजस्तो संवेदनशील पेसाका व्यक्तित्वले बिरामीको मर्का नबुझेको प्रति अक्रोश व्यक्त गर्दै उनले भेदभाव गरिएको प्रति चित्तसमेत दुखाइन् । ‘चिकित्सक भएर बिरामीको मर्का नबुझ्ने ?, इन्दिराले आक्रोशित मुद्रामा प्रश्न गरिन्, ‘एकजनाको अप्रेसन सकिएपछि अन्य बिरामीको अप्रेसन हुँदैन भनियो, यो कतिसम्मको न्याय हो ?’
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक हितका लागि आवश्यक सेवामा हडताल निषेध गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेलगत्तै गोदानले कर्मचारी समायोजनको सार्वजनिक सूचीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै देशभर आह्वान गरेको सेवा–बहिष्कार आन्दोलनका कारण शुक्रबार देशभरका सरकारी अस्पतालका आकस्मिकबाहेकका सेवा नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । यसबाट निजी स्वास्थ्यसंस्थामा पहुँच नभएका अर्थिक हिसाबले विपन्न हजारौँ बिरामी उपचारसेवाबाट वञ्चित भएका छन् । शुक्रबार अस्पताल पुगेर अलपत्र परेका कतिपय बिरामीले स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा पटक–पटक गरिने हडतालले सर्वसाधारण जनता मारमा परेको जनाउँदै यस्ता गतिविधिको खुलेरै निन्दासमेत गरेका छन् ।